Buugga Soosaarayaasha - Suuqa B2B - Macluumaadka Alaab-qeybiyeyaasha
halkan at Alietc waxaa naga go'an abuurista adduunka oo dhan Suuqa B2B taas oo isu keenta soo saarayaasha, iibiyeyaasha iyo iibsadayaasha, gacan ka geysashada abuurida wax wada qabsi iyo muddo-dheer, xiriir ganacsi oo waara.
Furaha guusha sida a saaraha ku nasan karaa dhowr arrimood oo shaqsi ah, qaarna ku lug leh badeecadaada, halka kuwo kalena ay ku lug leeyihiin sida aad ula macaamileyso kuwa wax iibsan kara. Si loo kordhiyo fursadahaaga guusha ee ku saabsan Alietc, waxaan soo uruurinay tan waxtar leh Tilmaanta soo-saaraha Si lagaaga caawiyo inaad ka fogaato khaladaad badan oo caadi ah oo la sameeyo markii la isku dayo iibso alaabada.
Furaha abuuritaanka xiriir guul leh oo lala yeesho kuwa wax iibsada waa inaad ka gudubtaa ballanqaadyadaada
Tan, waxaan ula jeednaa inay kafiican tahay in la noqdo mid macquul ah jadwalka waqtiga oo aannan sameynin ballanqaadyo been ah marka la eego tayada waxsoosaarka. Xiriirka wanaagsan ee shaqada ayaa lagu dhisaa hal shay oo keli ah taasina waa aaminaad. Abuuritaanka aaminaadu waa inay noqotaa yoolkaaga koowaad marka aad la macaamilayso macaamiil cusub. Waxa kale oo muhiim ah in aaminaada la yimaadaa daacadnimo. Haddii aad had iyo jeer ku bixiso waqtigi xaddidan, ama xitaa goor sii horreysa, muxuu iibsade ugu tagayaa meel kale, xitaa qof u siinaya shey la mid ah 3% qiimo hoose?
Ku foognow xakameynta tayada
Iibsadahaagu waxaa laga yaabaa inuu si fiican kuu weydiin lahaa tusaalaha badeecada (yaasha) adiga soo saaridda. Muunadaha aad diraysid waxaa loola jeedaa inay noqdaan kuwo ka turjumaya run oo dhab ah tayada tayadaaga wax soo saarka. Alaab kasta oo aad u dirto iibsadahaas waa inuu ahaadaa mid isku mid ah, ama tayo fiican oo aan lagu xushay qaar ka wanaagsan, qaar isku mid ah iyo tayo xumo. Waa inaad ku shaqeysaa nidaam xakameyn tayo sarre leh inta aan la keenin wixii amarro ah si aad u hubiso in iibiyaha wax dacwo ah maheli doonaan markay helaan amarkooda. Mar labaad, haddii aad ku gaarsato tayada, waqti ka dib, sababta a iibiyaha meel kale eeg? Way ka jaban tahay sii haysashada macmiil inta aad ka heli lahayd mid cusub.
Ula xiriir si cad oo isdabajoog ah
Isgaarsiintu waa cunsur muhiim u ah xiriir kasta oo ganacsi waana fikrad fiican inaad naftaada gasho kabaha iibsadaha markay tahay la xiriirka iyaga. Badanaa iibsadayaasha iyo waxsoosaarayaashu waxay ku sugnaan karaan kumanaan mayl masaafo, iyo markii amarro la sameeyo ama samballo la codsado, maalmaha soo socda, ma jiraan wax ka sii xun iibsadaha marka loo eego aamusnaanta guud. Haddii ay tahay taleefan wicitaan (taabashada shakhsi ahaaneed marwalba waa la soo dhaweynayaa) ama emayl ahaan, hubi inaad iibsadahaagu u ogyahay waxa ku dhacaya amarkooda.
Mar alla markii ay badeecada (yaasha) yimaadeen, waxaad weli rabtaa inaad la xiriirto iibsadeha si aad u hubiso inay 100% ku faraxsan yihiin amarkooda. Tani waxay u oggolaanaysaa iyaga inay ogaadaan inaad si dhab ah u daryeesho heerka qancitaankooda waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ka takhalusto wixii dhibaatooyin ah ama aad wax ka beddesho amarrada mustaqbalka. Sidii horey loo yiri, hay macmiil ka badan mid helaa.
Soo celinta ayaa wax walba lagu xisaabiyaa
Halkan Alietc waxaan ku shaqeeynaa nidaam jawaab celin ah soosaaraha, alaab-qeybiyeyaasha iyo iibsadeyaasha. Waxaan ku dhiirigelineynaa booqdayaasha inay ka baxaan ra'yi dhiibashada qumman ee ku saabsan qofka / ganacsiga ay la macaamileen. Jawaab-celintaan waa mid muhiim ah, inaad tahay iibsade ama iibiya, sida ugu fiican oo aad u sii wanaagsanaato sumcaddaada, dadka aad u janjeera waxay jeclaan doonaan inay kula macaamilaan.
Qof kasta ama ganacsi kasta oo aad la macaamilayso, waa inaad had iyo jeer higsato inaad ilaaliso sumcaddaada oo aad ujeedo ka dhigato inay kuu daayaan dib u eegis dhalaalaysa 5 * markasta oo aad ganacsi la leedahay. Way fududahay in la kasbado iyaga, sidoo kale EA $$$$$$$$$$$$ Y si aad u kordhiso dakhligaaga alietc.com
Liis gareynta Wax soo saarkaaga (yada )aga ah Alietc
Waxaan ku siinay dhammaan agabkii aad ugu baahan lahayd si aad u abuurto liis alaabo soo-saar indhaha ah. Si kastaba ha noqotee, waxa aad sheegeyso iyo sawirada aad dooratay inaad isticmaasho adigaa iska leh.
Waxaan kugula talineynaa inaad si cad oo sax ah u sharaxdid badeecad kasta oo ay tahay inaad iibiso, adigoo xasuusinaya inaad ku darto macluumaadka kuwa iibsada ay u badan tahay inay soo jiitaan.
Ha been sheegin wakiillada alaabada ama taariikhaha keenida. Kaliya tani uma horseedi doonto niyad jab xagga iibsadahaaga, laakiin waxay u arki doontaa iyaga inay doorteen inay ganacsi ka qabtaan meel kale.
Fadlan la soco haddii aan helno cabashooyin isdaba joog ah oo ku saabsan soo saaraha, looma ogolaanayo inay sii wadaan isticmaalka qalabka iibka Alietc.
Waxba kuma garaacaan muuqaal tayo sare leh. Waxaad ku arki doontaa liiska xulashada aad ku dari kartid mid, ama dhowr sawir oo alaabooyin ah oo aad rabto inaad iibiso. Sawirada sawirada casriga ah maanta ma jiraan wax cudurdaar ah oo loogu talagalay sawirrada tayada liita.
Xulashada sida loo iibiyo badeecadaada Alietc
Waxaad ikhtiyaar u leedahay habka aad u xayeysiiso alaabadaada. Haddii aad ka shaqeyso jawi aad u tartan badan, waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad shaaca ka qaaddo sicirkaaga, ama waxay noqon kartaa inaad soo bandhigto qiimo dhimis aad u badan oo ku saabsan amarada badan / soo celinta. Haddii aad doorbideyso inaad ka dhigto dhinaca maaliyadeed ee waxyaabaha waxyaabaha qarsoon, markaa si fudud u dhaji "Nagala soo xiriir qiimaha ugu wanaagsan". Tani waxay sidoo kale si fiican ugu shaqeyneysaa alaabada ay qiimahoodu is beddeli karo iyadoo ku xiran xoogagga suuqa iyo qiimaha agabka ceyriinka.
Haddii kale, waad bixin kartaa badeecadaada adoo codsanaya dalab laakiin aadan bixin qiimo (inkasta oo tusaha qiimaha uu waxtar yeelan karo). U oggolow dadka inay ku iibiyaan badeecadaada iyo habkaas oo aad ku furi karto wadahadal, wax aan yareyn marka aad bixiso qiimo go'an.
Iibinta qiimo go'an ayaa sifiican u shaqeyn kara haddii aad ogtahay in qiimahaagu aad u tartamayo, oo aad rabto inaad garaacdo tartamayaashaada.
Ka helitaanka codsiyada iibsadayaasha
Dhammaan badeecada aad u qortay in ay soo saarto shirkaddaadu waxaa laga heli karaa mashiinka raadinta. Natiijo ahaan, haddii iibsaduhu uu raadinayo badeecad gaar ah oo uu arko inaad wax soo saartay, waxay awood u yeelan doonaan inay kuu soo diraan codsi qiime.
Xulashada heerka xubinnimadaada
Waxaan abuurnay sedex heerar xubin, mid kamid ah waa inuu kugu haboonyahay. Xulashada xubinimadaadu waxay kuxirantahay mugga ganacsiga iyo tirada badeecada aad rabto inaad ku iibiso sistamka Alietc. Waxaan kaa rabnaa inaad xubin ka noqotid masraxa Alietc si loo hubiyo inaad tahay shirkad faa iido ka heshay badeecada (yaasha) aad u soo bandhigeyso iib inay yihiin run. Tani waxay si aad ah uga shaqeysaa faa'iidadaada maadaama aad tahay Alietc khasab kuguma ahan inaad la tartameyso shirkado sumcad yar.
Haddii ay tahay wax soo saaris si loo dalbado, ama loo soo saaro wax iib ah oo lagu iibinayo suuqa furan, Alietc wuu ku caawin karaa wuuna kaa caawin doonaa. Sahaminta kooban ee websaydhkeena ayaa kuu cadeyn doonta sida ay nooga go'an tahay inaan ku xirno iibsadayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha soo-saareyaasha, gaar ahaan soosaarayaasha alaabooyin gaar ah.
Sideen u gaarnaa tan? Adoo bartilmaameedsanaya ereyada furaha ah ee leh farsamooyinka wax ku oolka ah ee SEO (qalabka kor u qaadista mashiinka raadinta), waxaan hubin karnaa in dhammaan kuwa wax soo iibsada ee alaabtaadu ay ka warqabaan jiritaankaaga iyo wixii aad soo bandhigi lahayd.
Waxa kale oo muhiim ah waa in la fahmo in aad leedahay awood guud oo ah sida iyo cidda aad u iibineyso badeecadaada, iyo qiimaha noocee ah. Suuqyadu waxay isu beddeli karaan habeen hore iyagoo leh awood iyo qalab ay ku falceliyaan, isla markiiba, isbeddelada suuqa waxay xaqiijinayaan inaad ku guuleysato natiijooyinka aad u baahan tahay, waqti iyo waqti kale.
Markaad dhammaystirto astaantaada, hadda waxaad ku jirtaa meel aad ku bilawdo iibinta alaabadaada, taas oo aan uga dhignay sida ugu fudud ee suurtagal ah inaan wax ku qabanno. Quruxda Alietc waa inaan rabno inaan wax walba ka dhigno mid fudud oo hufan, sidaa darteed waxaad leedahay ikhtiyaar laba ikhtiyaar, ama waad adeegsan kartaa labada ikhtiyaar.
Alietc - Aad iyo aad In kabadan Suuqa Suuqa